Tora Maoko-Pakurovedza muIT Munda neComputer Degrees »Hodges U
Categories: sanyina, jaya, Computer Ruzivo Technology, Computer Science, Featured, Nhungamiro yepamhepo, Technology
Computer Science vs. Computer Information Technology Dhigirii
Ngatitangei neBasiki… Uri Kutsvaga Computer Science Degree kana Computer Ruzivo Technology Degree? Mhinduro yacho inogona kukushamisa.
Vazhinji vanhu vanofunga nezve "computer science" sekubata-kwese izwi rekuti macomputer degrees Icho chokwadi ndechekuti, izvo zviviri hazvigone kuve zvakanyanya kusiyana. A degree muComputer Science inoongorora iyo "sainzi" zvinoonekwa zvemakomputa nepo Computer Information Technology degree uye hwaro hunogadzirira iwe kuti ushandise maoko-muiyo IT Indasitiri.
Isu tinopa madhigirii emakomputa nehunyanzvi zvinotarisa:
Computer Ruzivo Technology is dhijisiti inogadzirirwa yakagadzirirwa kupa vadzidzi vane hunhu hwekushanda mune yakajairwa IT munda vachibvumira vadzidzi kusarudza sarudzo dzinokodzera ruzivo rwavo, hunyanzvi, uye ruzivo - zvakasarudzika zvinoita kuti vabudirire.
Kuchengeteka uye Networking iri dhigirii rinopa vadzidzi mukana wekuchera zvakadzika mukuchengetedza cyber uye cyberattacks vachishandisa masimuleti uye maturusi anowanikwa munzvimbo yebasa kuti vanzwisise kwete kungoitika kwekuchengetedzwa kwekuchengeteka, asi kuti ungazvidzivirire sei.
Software Development ndeyevadzidzi vanofarira zvirongwa uye kukodha. Ichi chikamu chakazara chevadzidzi vanofarira kugadzira SAAS software, software inoenderana neinternet (senge webhu dhizaini kana e-maturusi), software yekutamba, kana maapp.
KuHodges University, isu tinogadzira maoko-padivi reIT nyika kuti upinde iwe mumusika webasa nekukurumidza - nehunyanzvi hwakakodzera uye zvakadzamidzirwa hunyanzvi zvitifiketi. (Ona pazasi kuti uwane ruzivo rwakazara pane edu madhigirii zvirongwa)
Affordable Makoji: Inodhura Pamubatanidzwa Wepamhepo muRuzivo Technology Degrees
Bachelor Degree Center: 15 Yakanakisa Pamhepo Bachelor muGraphic Dhizaini ye2020
Yakanakisa Koreji Ongororo: Chinongedzo Kumakomputa Makoreji MuFlorida
Akanaka Makoreji: Iyo Yakanakisa Pamhepo Bachelor's muComputer Zvirongwa Zvirongwa zve2020
Zvikoro Zvakakosha Zvikuru: Akanakisa Akachipa Graphic Dhizaini Dhijitari Pamhepo
Computer Chikamu: Iwo 20 Akanakisa Online Bachelors muRuzivo Technology 2016-2017
Graphic Dhizaini Degree Hub: Wepamusoro 15 Pamhepo Bachelor muGraphic Dhizaini ye2020
Graphic Dhizaini Degree Hub: Wepamusoro 15 Inonyanya Kutengeka Online Bachelor's muWebhu Kuvandudza uye Dhizaini 2020
Dzidza.org: Yakanakisa Pamhepo Bachelor muRuzivo Technology (IT) Degree Zvirongwa
Great College Zvipenga: 20 Akanakisa Madhiri pane madiki Makoreji muFlorida
Akangwara: Iwo Akanakisa Pamhepo Graphic Dhizaini Zvirongwa
State University: Zvikoro Zvinonyanya Kuzivikanwa zveComputer Graphics Major & Degree Chirongwa
Iwo Akanaka Kwazvo Madhigirii: Wepamusoro 25 Zvakanakisa MIS Degree Online Zvirongwa 2018
Zvikoro Zvakanakisisa: Iwo gumi Akanakisa Online Bachelor's muComputer Zvirongwa Zvirongwa
Zvikoro Zvakanakisisa: Iyo Yakanakisa Pamhepo Bachelor's Software Injiniya Dhigirii
Zvikoro Zvakanakisisa: Iyo Yakanakisa Pamhepo Bachelor iri muComputer Injiniya Zvirongwa
Kukosha Zvikoro: Wepamusoro gumi Anonyanya Kutengwa Pamhepo Bachelor's Zvirongwa muGraphic Dhizaini 10
Dzidza.org: Yakanakisa Pamhepo Cyber ​​Security Bachelor's Degree Zvirongwa
Kugadzirira nzira yevakadzi mune tech minda kwese kwese!
KuFisher Chikoro cheTekinoroji, isu tinotenda kuti kuiswa kwevanhu vese, kusanganisira vakadzi nevaya vanobva kunzvimbo dzakamiririrwa muSTEM, kwakakosha mukuenderera mberi kukura uye kubudirira kweiyo IT munda.
Tarisa pazviri nenzira iyi, tekinoroji makambani emangwana ari kutsvaga matsva uye matsva mazano anoshanda kune wese munhu. Pasina kuiswa kwevakadzi-vakanangana nevakadzi mumabasa ehutungamiriri, kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvatinoshandisa mazuva ese zvinotadza kuzadzisa zvido zvevakadzi vanozvishandisa.
"Chisinganzwisiswi nevanhu vazhinji ndechekuti komputa ndiyo hwaro hweanenge mamwe marango eSainzi, Tekinoroji, Injiniya neMathematics (STEM)," akadaro Lanham. KuYunivhesiti yeHodges, iyo Fisher Chikoro cheTekinoroji inopa madhigirii anobatsira vadzidzi kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti huve nehunhu hwakanaka muzvikamu zvetekinoroji yenharaunda yedu yebhizinesi.
Izvo zvakaratidzwa kuti vasikana havateedzere mabasa eetekinoroji mwero wakaenzana newavo varume varume nekuti ivo havana kuratidzwa nekombuta Hardware, software, uye kukodha pazera diki rakaringana kuteedzera macomputer eruzivo rwecomputer. Panzvimbo pekuuya kukoreji nharaunda neruzivo rwakafanana sevamwe vavo, vakadzi vanonzwa kumashure uye vanopedzisira vasiya iyo ingave iri yepamusoro panzira panzira.
Computer Information Technology Zvirongwa
Sangana muSainzi muComputer Ruzivo Technology
Yedu AS muComputer Ruzivo Tekinoroji inopa hwaro hwakasimba hweyese yekupinda-chikamu chinzvimbo mune iyo IT shamba kana kutsvaga yako yega nzvimbo yekutarisa paunenge uchienderera kuBachelor yako degree degree.
Inogona kugadzirira vadzidzi vane huwandu hweruzivo munzvimbo dzese dzekutanga dzenzvimbo yehunyanzvi.
Inogona kugadzirira vadzidzi vekupinda-chikamu chekubatsira tafura kana yerutsigiro mhando yezvinzvimbo zveIT mune chero indasitiri.
Java Chirongwa Ini ndinopa kunzwisiswa kwakakosha kwehurongwa, izvo zvinogona kubatsira vadzidzi sezvavanopfuurira kunzvimbo yavo yakasarudzwa yekutarisa.
A + Hardware I uye II makosi anosanganisira kuwana kweyakagadziriswa LabSim zvemukati zvichiratidza vadzidzi vane huwandu hwakawanda hweanofananidzwa iwo anogona kushandiswa kumakirasi emunguva yemberi nenzvimbo dzepasirese-nyika.
Vadzidzi vanosarudza yavo yavanoda munda yekufarira uye sarudza electives zvinoenderana nesarudzo yavo yehunyanzvi. General Computer Information Technologies, Programming uye Coding, kana Cybersecurity uye Networking kosi inogona kupa hwaro hunodiwa kuteedzera iyo bachelor's degree yesarudzo.
AS muCIT Sequence
Kupinda-Chikamu IT Mabasa
Bachelor yeSainzi muComputer Ruzivo Technology
Yedu BS muComputer Ruzivo Technology inobvumira vadzidzi kuti vagadzirise madhigirii avo zvichienderana nehunyanzvi hwega uye chishuwo cheiyo IT shamba.
Powershell scripting makosi anogona kupa vadzidzi iwo mukana wakasarudzika wekuwana iyo chaiyo-yepasirese network manejimendi ruzivo rwakakosha kugadzira nekumhanyisa zvinyorwa zvinodzokororwa munzvimbo dzakasiyana dzemasaiti kupedzisa kudzokorora uye kwakaomarara mabasa mukati mesangano reiyo chero saizi.
Tora bhizimusi rako zvitupa uye degree panguva imwe chete. Inowanikwa indasitiri zvitupa zvinosanganisira MOS, CompTIA A +, CompTIA Net +, CCNA, MCP, CompTIA Security +, & CompTIA Linux +.
Sarudza iyo Computer Information Technology nzira kana iwe uchitsvaga dhivhosi inowirirana inoenderana neakasiyana siyana eetekinoroji-anotariswa mabasa mukati mechero mhando yesangano.
Electives inobvumidza vadzidzi kusanganisa cybersecurity, network, manejimendi manejimendi, kana hunyanzvi hwekugadzira software kugadzira degree iro rinogadzirisa ruzivo rwekudzidza kutsigira zvinangwa zvega zvega zveumwe mudzidzi.
Vadzidzi vanogona kudzidza kuputsa matambudziko ebhizinesi kuti vaone yakakodzera IT mhinduro, vobva vagadzira nzira inoshanda yeiyo yakazara-chikamu kuita maitiro, kusanganisira kudzidziswa kwevashandi uye kuenderera kuronga kuronga.
BS muCIT Sequence
Ruzivo Technology Technology Mabasa
Cybersecurity uye Networking Degree Zvirongwa
Bachelor yeSainzi muCybersecurity uye Networking
BS yedu muCybersecurity uye Networking inoendeswa neinopindirana, maoko-pamaitiro (kushandisa maturusi chaiwo anowanikwa munzvimbo yebasa) yekumisikidza network mhinduro, uye kuona kwecyber nekudzivirira kunogona kukupa hunyanzvi hunodiwa kutanga pazuva rekutanga.
Vadzidzi vanopihwa nemukana wekudzidza kushandisa simba rePowerShell muWindows nharaunda kuitira kuti vagone kuwedzera network mabasa eruzivo kusangano rese kuburikidza nemaitiro ekunyorera.
Hodges U inopa chaiwo michina yevadzidzi kuti vagadzire akasiyana maseketi masisitimu ekunyora, kuyedza, uye kuita PowerShell zvinyorwa, izvo zvinogona kubatsira kuvaka uye kunatsiridza hunyanzvi hwavo vasati vapinda muvashandi.
Dzidza yekucheka-kumucheto mhinduro kune zvazvino cyberkuchengetedzeka uye netiweki nyaya kubva kune vechikoro vane akakosha anoshanda mu-munda ruzivo. Teerera semupurofesa wako, anoshanda kusangano rehurumende, achipa zvisingaenzaniswi, chaiwo-ehupenyu mienzaniso yema cyberattacks uye anotsanangudza kwete chete kuti kurwisa kwakakwidziridzwa sei, asiwo kuti ingadai yakadzivirirwa sei. Ruzivo urwu runoshandura mukudzidziswa kwemaitiro ekunyatsoona nekuchengetedza sangano kubva kucyberattack, pamwe nekuronga nekupedzisa triage yesangano mushure mekurwiswa kwakabudirira kwakakwikwidzwa kunopesana nesangano.
Vadzidzi vanogona kuwedzera hunyanzvi hwavo hwekuchengetedza mune yedu Ethical Kugura kosi. Vadzidzi vanonyudzwa munzvimbo yekudyidzana umo ivo vanoratidzwa maitiro ekuyedza, kuyedza, kubira, nekuchengetedza avo masisitimu. Iyo yebhu yakasimba nharaunda inoverenga mudzidzi wega wega ane-yakadzika ruzivo uye anoshanda ruzivo neazvino akakosha ekuchengetedza masystem.
Yedu IT makirasi anomhanya pane yakazvimirira network kubvumira vadzidzi kuti vashandise simulation software yekutengesa, kuona kuchengetedzeka, uye kuongorora zviitiko. Uyu mukana wekufananidza unogona kubatsira vadzidzi kukudziridza uye kusimbisa cybersecurity uye network network kuburikidza nekuvatendera kumhanyisa bvunzo uye kuteedzera mamiriro ezvinhu echokwadi-epasirese, -nguva-yekudzidza iyo inopedzisa echinyakare nzira dzekudzidzisa.
Vadzidzi vanozove nemukana wekugadzira akasiyana siyana enetiweki network nemaseva uye nzvimbo dzekushandira, dzidza maitiro ekushandisa chero saizi network zvine hungwaru uye nemazvo, uye dzidza maitiro ekuona, kugadzirisa, uye kudzivirira akasiyana marudzi ezvekutyisidzira kwekuchengetedza pasangano rakabatanidzwa zviwanikwa.
BS muCybersecurity & Networking Sequence
Computer Network Yekuvaka Mabasa
Software Kuvandudza Degree Zvirongwa (Coding uye Computer Chirongwa)
Bachelor yeSainzi muSoft Development
Yedu BS mune Software Kukudziridza inogona kukugadzirira iwe kugadzira chimwe chinhu chakakura. Kunyangwe iwe uchifarira kugadzira software, webhu-based budiriro, kana iyo nyika yekutamba - isu takufukidza iwe.
Java Chirongwa II inogona kupa vadzidzi maitiro ekudyidzana epamberi epurogiramu. Vadzidzi vanogona kuwana hunyanzvi mukunyora yakaoma software kodhi iyo inowedzera nguva yekuuraya uye nzvimbo yekuchengetera iyo iyo software chirongwa inoda kuita nemazvo kuita uye kushanda.
Isu tinofukidza huwandu hwenzvimbo dzekuchengetedza idzo dzinowanzo kuwanikwa mumapurogiramu esoftware uye dzinogona kugadzirira vadzidzi kuti vavake kodhi iri yakanaka, inoshanda zvakanyanya, uye yakachengeteka.
Wana ruzivo rwekuti ungashandise sei hunyanzvi hwauri kudzidza kune chaiwo-epasirese mamiriro eIT kubva kumapurofesa anoshanda muindastiri.
Kune vadzidzi vanoteedzera mitambo, isu tinopa kurairirwa muKutangisa ku Game Chirongwa uye Nesimba Chikumbiro Kuvandudza pamwe neInternet Kuteedzera Zvirongwa uye Databases.
Kune vadzidzi vanofarira webhu-based software kuvandudza, isu tinopa kurairirwa muJava Programming, Programming Concepts II, Webhu Dhizaini I, Sangano Zvishandiso zveSocial Media uye Collaborative Technologies, e-Commerce, Mobile Application Development, uye Internet Application Programming uye Databases.
Vadzidzi vane mukana wekudzidza kukodha mitauro sechikamu chedhigirii chirongwa chavo, pasina bhuti rebhuti rinodiwa. Hodges U inopa makosi muJava, Python, XML / Java (kuvandudzwa kweapp), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
Shandisa hunyanzvi hwekukodha iwe hwawadzidza pamaprojekiti senge kugadzira iyo Android app, kugadzira mapurogiramu esoftware uchishandisa Java, kana kugadzira mutambo wekutanga unosanganisira mafaera eruzha, mepu dzetiles, uye nekuumburuka kumashure kusimudzira ruzivo rwevatambi.
Dzidza maitiro ekuenzanisa hunyanzvi hwako hwekukodha pamwe chete nekugadzira iyo yakanaka yakazara mushandisi ruzivo.
BS muSoft Development
Software Yekuvandudza Mabasa
Chii Chinogadza Hodges U Parutivi?
Kana iwe uri kutsvaga kuti udzidze madigiri ane chekuita nekombuta, iwe ungangoda kuziva kuti nei uchifanira kuenda kuHodges U. Zvirongwa zvedu zvakagadzirirwa zvakasarudzika kukugadzirira iwe kuti uunze mhedzisiro pazvirongwa zvakaoma, zvine chekuita neIT.
Maindasitiri-ane hukama neIT makosi akagadzirirwa kuvaka ruzivo rwakakosha sevadzidzi vachienderera kuburikidza nedhigirii ravo rakasarudzwa
Inopindirana kudzidza iri musimboti weimwe yeedu IT makosi. Hodges U anotora anoshingairira kudzidza kusvika padanho nyowani nekupa ekufananidza labs, chaiwo michina, uye chaiwo network kune vadzidzi kuti vaedze hunyanzvi hwavo uye ruzivo vasati vakumbirwa kuita munzvimbo yebasa.
Wese mudzidzi anoziviswa kune zvekutanga zvehurongwa achishandisa Java uye anodzidza kushandisa edhisheni pfungwa kuti apedze chaiwo epamberi software yekuvandudza mabasa. Vadzidzi vanowana mukana wekunyora mapurogiramu akareruka anoratidza kubatana kwe software mashandiro pamwe nekuiswa kwenetiweki uye maprotocol ekuchengetedza.
Manejimendi manejimendi akabatanidzwa mune yega yega IT degree chirongwa kuitira kusimudzira hunyanzvi hunobatsira vadzidzi kubata akawanda panguva imwe chete IT mapurojekiti anowanikwa munzvimbo dzemazuva ano dzebasa.
Vadzidzi vanogona kutora bvunzo dzeindasitiri kuHodges U pamutengo wakadzikiswa wevadzidzi, kungave sekumira-voga chitupa kana sechikamu chedzidzo yavo. Pavakapedza kudzidza, vadzidzi vanogona zvakare kugamuchira hunyanzvi-chaihwo zvitifiketi mukuwedzera kune yavo degree diploma.
Imwe neimwe BS Ruzivo Technology Degree inopera neSystem Analysis & Solutions Architecture kosi. Iyi kosi inopa vadzidzi mukana wekuratidzira kunzwisisa kwavo kwemaitiro ekushandura zvinodiwa zvebhizinesi kuburikidza neese masystem ekuvandudza hupenyu kutenderera kuburitsa chirongwa chakapedzwa chekumisikidzwa kweiyo yakabatanidzwa ruzivo system mukati mesangano, zvichipa humbowo hwekuti mudzidzi akagadzirira kutora pane basa reIT mukati memunda wavo wakatarwa.